Wakiilada Beesha Caalamka oo kulan deg deg ah ka leh xaaladda Soomaaliya - Awdinle Online
Wakiilada Beesha Caalamka oo kulan deg deg ah ka leh xaaladda Soomaaliya
Wakiilada Beesha Caalamka ee Soomaaliya ee C6+ ayaa shir ku leh Xalane ee Magaalada Muqdisho, iyaga oo shirkooda uga hadlaya xaaladaha kasoo cusboonaaday Magalada muqdisho.
Xubnaha Beesha Caalamka ayaa horay walaac uga muujiyay xaalada kajira dalka iyo khilafka ka taagan doorashooyinka, waxaana la filayaa inay go’aano la xiriira arrimaha Soomaaliya inay soo saran.
Kulankaan ay leeyihiin Wakiilada Beesha Caalaamka ayaa kusoo aaday xilli xiisada siyaasadeed ee dalka ay cirka isku shareetay, kaddib markii shaqaaqooyin sababay dhimasho iyo dhaawacay shalay iyo habeen hore ka dhaceen Muqdisho.
Xubnaha Midowga Musharixiinta Madaxweynaha ayaa shalay, iyaga oo Warbaahinta la hadlayay waxaa ay ugu baaqeen Beesha Caalamka inay isha ku hayaan tallaabooyinka uu qaadayo farmaajo, isla markaana aysan ku taageerin.
Previous articleXOG: Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland oo looga yeeray Nairobi
Next articleHir-Shabeelle oo ku dhawaaqday in degaannadeeda uu ku faafay Coronavirus